Shariif Xasan: Waa in lagu dhaqmaa nidaamka Federalka ee dalka... | Universal Somali TV
Shariif Xasan: Waa in lagu dhaqmaa nidaamka Federalka ee dalka uu qaatay
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa wuxuu sheegay Somaliya inay qaadatay hanaanka Federalka oo dalka iminka uu ku shaqeeyo, iyadoo Maamul nidaamka Federalka ku yimid dalka ay ka dhisan yihiin.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wuxuu sheegay Federalka in afka la sheego inaysan aheyn balse ay u baahan tahay ku dhaqan, maadaama muddo afar sano iyo ka badan laga soo shaqeynaayay in dalka uu ka hirgalo nidaamka Federalka.
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, ayaa wuxuu sheegay dhibaato kala duwan in laga soo maray nidaamka Federalka, isaga oo ugu baaqay Dowladda dhexe inay ku dhaqanto nidaamka Federalka oo aysan shaki galin arintaasi.
"Anaga Federalka waxaan aaminsanahay in inta afka laga sheego ku dhaqankiisa aanan la fulin, Dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa Federaal ayaan nahay in aan Federalkaa ku dhaqano, waa wadada kaliya ee looga bixi karo dhibaatada ku dhaqanka Federalka." Ayuu yiri Shariif Xasan oo ka hadlaayay Magaalada Baydhabo.
Kan-xigaCiidamada xasilinta oo hawlgal ka ful...
Kan-horeDP World oo maanta la wareegaysa Maam...
39,207,497 unique visits